रातदिन नभनी बालबालिकाको उपचारमा समर्पित मेहनती डा. मोहन
धनगढी | असोज २३, २०७८
धनगढीका नवजात शिशु तथा बाल रोग विशेषज्ञ ३८ वर्षीय डा. मोहन साउँदको हप्ताका अधिकांश रातहरू अनिदो बित्छन् । चिकित्साकीय पेशामा उनको दक्षता र सहजै उपलब्धताले कहिलेकाहीँ मध्यरातिमा पनि उनको फोनको घण्टी बज्छ र उनी कर्म गर्न तम्तयार हुन्छन् ।
उनी भन्छन् ‘मेरो नियमित ड्युटी बिहान ९ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म हुन्छ तर म जो सुकैको सहज पहुँचमा हुने हुँदा मध्यरातिमा पनि मानवीय धर्म निर्वाह गर्छुु ।’
उनी धनगढीस्थित माया मेट्रो अस्पतालका मेडिकल डाइरेक्टर पनि हुन् । अस्पतालको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी र उनको पेशाप्रतिको लगावले सिंगो अस्पताल नै बाल रोग उपचार हबको रूपमा परिणत हुँदै गएको छ ।
धनगढीमा बाल रोग उपचार हुने अस्पताल र चिकित्सक नभएका होइनन् तर स्थापनाको छोटो अवधिमै धनगढीकै मुख्य उपचारको केन्द्र तथा रेफरल अस्पतालको रूपमा अस्पतालले ख्याति कमाउन थालेको छ । अस्पताल २०७५ भदौ १५ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो ।
उनी दाबी गर्छन्, ‘३ वर्ष अगाडिसम्म सुदूरपश्चिमका नागरिकहरू आफ्ना बालबालिकाको उपचारको लागि भारत वा नेपालगञ्ज, काठमाडौं जानुपथ्र्यो तर अब करीब ६०–७० प्रतिशतलाई यहाँ सेवा दिइरहेका छौं ।’
जहाँ सेवाको प्रभावकारिता, त्यहाँ सेवाग्राही पुग्नु आमप्रवृत्ति हो । दैनिक हजारौं सेवाग्राहीले भरिभराउ हुने अस्पतालमा ६० प्रतिशत सेवाग्राही बालबालिका नै रहने गरेको डा. साउँद बताउँछन् ।
दैनिक ७० भन्दा बढी नवजात तथा बालबालिकाको माझमा रहँदै आएका उनी भन्छन्, ‘हामी सकेसम्म सहज, सुलभ सेवा दिनमा तत्पर र प्रतिबद्ध छौं । मेरो हरपल भविष्यका सुन्दर मुनाहरूसँग नै बित्छ ।’
एसएलसीदेखि एमडीसम्म छात्रवृत्ति
स्व. बुवा केवलसिंह साउँद र आमा धर्मादेवी साउँदको कोखबाट अछामको दुर्गम बस्तीमा जन्मिएका डा. साउँदको परिवार २०४३ सालमा तराई (कैलाली) झरेको थियो तर जीविकोपार्जनका लागि उनका बुवा भारत पसे ।
पहाडको अभावै–अभावको जीवनबाट आजित उनको परिवार कैलालीको साविक साँढेपानी गाविसको बरछुरियामा बसाइ सर्‍यो । उनको प्रारम्भिक शिक्षा अध्ययन राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय तारानगरबाट भयो ।
पढाइमा निकै अब्बल उनले २०५५ सालमा टीकापुरको खडक मेमोरियल बोडिङ स्कूलबाट पहिलो श्रेणीमा एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गरे ।
बुवाको त्यो सपना
अभिभावक ‘कालो अक्षर भैंसी बराबर’ भए पनि छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने चेत भने थियो । फलतः उनी उच्च शिक्षाको लागि काठमाडौं गए । काठमाडौंको युनाइटेड एकेडेमीबाट उनले प्लस टु पहिलो श्रेणीमा उत्तीर्ण गरे । पछि बुवाको सपनालाई साकार पार्न उनी एमबीबीएको तयारीमा लागे ।
उनी भन्छन्, ‘बुवा भारतको नागपुरको एक छाला रोग विशेषज्ञ डा. मेहताको क्लिनिकमा सुरक्षाको काम गर्नुहुन्थ्यो । २८ वर्ष त्यही काम गर्नुभयो । डा. मेहताबाट प्रभावित हुनुभएका बुवाको चाहना छोरा डा. बनोस् भन्ने थियो । उहाँको चाहना र मेरो रुचिका कारण एमबीबीएसको तयारीमा जुटे ।’
एमबीबीएस अध्ययनको लागि शिक्षा मन्त्रालयको छात्रवृत्ति कोटामा नाम निकालेका उनी काठमाडौं मेडिकल कलेजबाट २०६४/२०६५ सालमा पहिलो श्रेणीमा उत्तीर्ण भए । लगत्तै उनले सरकारको छात्रवृत्ति परिचालन कार्यक्रम अनुसार २०६५ देखि २०६८ सम्म सेती अञ्चल अस्पतालमा काम गरे ।
त्यतिबेला नै आफूले एउटा अस्पताल स्थापनाको भिजन बनाएको उनी सुनाउँछन् । विकासको दृष्टिकोणले पछाडि परेको सुदूरपश्चिम, नागरिकले सहजै भरपर्दो उपचार नपाउने बाध्यता । बाल मृत्युदर पनि उच्च । भारतमा लुटिने, ठगिने विवशतालाई अन्त्य गर्न अस्पताल स्थापनाको भिजन बनाएको उनी बताउँछन् ।
एमबीबीएससम्मको पढाइबाट अतृप्त उनी सेती अञ्चल अस्पतालमा काम गर्दाताका नै पुनः अध्ययनको लागि काठमाडौं गए । एमडी (बाल रोग) अध्ययनको लागि आर्थिक अवस्था कमजोर भएका उनले छात्रवृत्तिको तयारी थाले तर डेढ वर्षसम्म नाम निकाल्न नसकेको र त्यसै वर्ष पितृशोकको सामना गर्नुपरेको डा. साउँद सुनाउँछन् ।
माया मेट्रोको जन्म
डेढ वर्षपछि छात्रवृत्तिमा अध्ययनका लागि नाम निकालेका उनले धरानको बीपी कोइराला प्रतिष्ठानबाट पनि पहिलो श्रेणीमै बालरोग विधामा एमडी गरे । त्यसपछि पुनः धनगढी फर्किए उनी ।
उनी अगाडि थप्छन्, ‘केही आफन्त, भाइहरू मिलेर माया मेट्राको अवधारणा ल्यायौं । धरानबाट केही अग्रज र केही सहकर्मीलाई बोलाए । १४–१५ जनाको ग्रूप ल्याए । त्यसपछि १ वर्षमा अस्पताल निर्माणको काम गरे ।’
अस्पताल निर्माणको शुरूआती दिन सम्झिँदै उनले अगागि भने, ‘निकै चुनौती थियो । बैकिङ सहायताले काम गर्‍यौं । पहिलो वर्ष सामान्य ओपीडी मात्रै चलायौं । दोस्रो वर्ष आईसीयू/एनआईसीयू सेवा विस्तार गर्‍यौं । तेस्रो वर्षमा सिटी स्क्यान सेवा थप्यौं ।’
हाल माया मेट्रो अस्पतालले अत्याधुनिक प्रविधि तथा उपकरणसहित आधारभूत सबै चिकित्सकीय सेवा दिइरहेको छ । सेवा मात्रै होइन, रोजगारी सिर्जना गरेको छ । हाल अस्पतालले १५० जनालाई रोजगारी पनि दिन सफल भएको छ ।
लामो सास फर्दै उनी भन्छन्, ‘पढाइ राम्रो भएकाले मैले एसएलसीदेखि एमडीसम्म छात्रवृत्तिमा पढे । खर्च गर्नुपरेन । नत्र यहाँसम्मको पढाइका लागि करोडौं खर्च हुन्छ । मेहनतले पढियो भने शिक्षा सुलभ पनि छ, नत्र खर्चिलो पनि उत्तिकै छ । परिश्रमसँगै व्यक्तिको सफलता पनि पछिपछि आउँछ ।’
निरन्तर सेवा थप
माया मेट्रो अस्पतालको हालसम्मको लगानी ४० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । १६ वर्षसम्मको लागि १० कट्ठा जग्गा भाडामा लिई सञ्चालित छ । छोटो समयमा व्यावसायिक सफलता पनि हासिल गरेका उनले अस्पतालले धनगढीको राजपुरमा आफ्नै १ विघा जमिन पनि जोर्न सफल भएका छन् ।
हालै अक्सिजन प्लान्ट समेत जडान गरेको अस्पताल थप सेवा विस्तारमा जुटेको छ । डा. साउँदले अस्पतालको सेवाबारे उल्लेख गर्दै भने, ‘आधुनिक बाल वार्डलाई थप विस्तारको तयारीमा छौ । विशेषगरी बच्चाहरूकै लागि हाल अस्पतालका भवनसँग जोडिएको अर्को भवन भाडामा लिइ काम थालेका छौ ।’
आईसीयू/पीआईसीयू, न्यूरो क्रिटिकल वार्डहरू, आधुनिक प्रकारको क्याबीनहरु, फिजियो थेरापी सेवा, टेण्टल सेवा र एमआरई सेवा तिहारलगत्तै शुरू गर्ने योजना अस्पतालको छ ।
मेडिसिन डिपार्टमेन्ट, स्त्री रोग तथा प्रसूति सेवा, नाक, कान, घाँटी सेवा, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, प्याथोलोजी विशेषज्ञ सेवा, डेण्डल सेवा, हाडजोर्नी सेवासहित २४सैं घण्टा आकस्मिक सेवा पनि अस्पतालले दिँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाबाट गण्डकी प्रदेशलाई साक्षर घोषणा गर्ने तयारी
घर-घरमा कच्ची सडक, पाइला-पाइलामा जोखिम
सडक दुर्घटनाले मात्रै नेपालको कूल गार्हस्थ उत्पादनको करीब ०.८ प्रतिशत आर्थिक क्षति हुने अनुमान छ । सडक निर्माणकै कारण पहाडी क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी पहिरो जाने गरेको छ । सडक बनाएकै कारण पहाडी क्षेत्रमा वार्षिक २...
राप्रपासँग भिड्न कांग्रेस–एमालेले तालमेल गरेको एक स्थानीय तह
नेपालकै होचो स्थान भनेर चिनिएको झापाको कचनकवललाई यसपटक स्थानीय तह चुनावले फेरि राष्ट्रिय राजनीतिको चर्चामा ल्याएको छ । कचनकवलमा भइरहेको चुनावी गठबन्धनलाई राष्ट्रिय रूपमा नै चासोका साथ हेरिएको छ । स्थानीय ...
राजधानीभित्रैको 'दुर्गम'का वासिन्दाको बेग्लै पीडा, स–साना माग पनि सुन्दैन राज्य
ललितपुरको सातदोबाटोबाट करीब ५ किलोमिटर दूरीमा रहेको गोदावरी नगरपालिकाको १३ नम्बर वडास्थित झरुवारासी विकट गाउँको पीडा भोग्न बाध्य छ । भन्नका लागि त उनीहरू राजधानीवासी हुन् तर उनीहरूले भोग्ने पीडा दुर्गम गाउ...
टीकापुरको चुनाव: ७ दशक पुरानालाई ३ महिने पार्टीको टक्कर, गठबन्धन–एमाले दुवैलाई चुनौती
देशैभर सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय चुनावको माहोल तताइरहेको छ । कैलालीको टीकापुरमा वैशाखको ३४ डिग्री गर्मीलाई बेवास्ता गर्दै प्रमुख राजनीतिक दल नेकपा माओवादी केन्द्र र कांग्रेस...
आक्रामक बजार विस्तारमा हिमालयन जाभा, कफीमा आत्मनिर्भर कहिले बन्ला ?
व्यस्त दरबारमार्ग । दरबारमार्गको अगाडि नारायणहिटी दरबार । नारायणहिटीको अगाडि छ दरबार मल । दरबार मलको माथिल्लो तलामा देख्न सकिन्छ हिमालयन जाभा कफी हाउस । व्यस्त दरबारमार्गमा जो कोहीले त्यो कफ...
अघिल्लोपटकको वाचा पूरा नभएकोमा आक्रोशित अत्तरियाका मतदाता– भोट माग्न त आऊन् ... !
कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको अत्तरियास्थित विष्ट टोलका मतदाता नेताहरूले यसअघि गरको प्रतिबद्धता पूरा नगरेको र जनताका पक्षमा काम नगरेको भन्दै असन्तुष्ट छन् । गोडेपानी खोलाले विष्ट टोललाई बर्सेनि समस्या दिन्छ भन...